२५ हजार तिरेर कोरोना परिक्षण गर्न पाइने समाचार भाइरल बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख खोल्यो, के हो यर्थाथ ? – Online Nepal
May 20, 2020 409
काठमाडौँ । २५ हजार शुल्क तिरेर कोरोना परिक्षण गर्न पाइने समाचार बाहिरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बल्ल मुख खोलेको छ । सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा मन्त्रालयले शुल्क तोकेको हल्ला भएपछि मन्त्रालयले कुनै शुल्क नतोकिएको जनाएको हो । सरकारले कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिबारे निर्देशिका बनाएको छ ।कोरोना परीक्षण गर्नुपर्नेहरुको सरकारले नै नि:शुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ । तर सरकारी निर्देशिकाको मापदण्डबाहिरका व्यक्तिले पनि कोरोना परीक्षण गर्न चाहेमा शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सक्ने जनाएको छ ।
शुल्कको बारेमा छलफल भइरहेको तर टुंगो नलागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डाक्टर समिर अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले निजी अस्पताललाई आरडीटी र सरकारी अस्पताललाई पीसीआर विधिमार्फत शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट तेस्रो व्यक्तिको मृत्यु भएको समाचार भाइरल बनेको छ । तर उपचाररत मान्छेलाई मृत्यु भएको भन्दै भ्रामक समाचार बाहिरिएपछि अस्पतालले त्यसको खण्डन गरेको छ ।
अस्पताफ प्रशासनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेकाे भए पनि यता अस्पतालका अध्यक्ष चिन्तामणी पाण्डेले बुधबार संचारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै बिरामीको अहिले पनि आईसीयू कक्षमा भेन्टिलेटरको सहयोगमा उपचार भइरहेको जानकारी दिए ।उनले भने, ‘समाचारमा बिरामीको मृत्यु भएको कुरा आएको छ । तर यो सत्य होइन । उनको अहिले पनि अस्पतालमा उचपार भइरहेको छ । अवस्था गम्भीर छ ।’ बिरामीको अवस्था अघिल्लो दिनको जस्तै रहेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले हल्लाका पछि नलाग्न आग्रह गरे ।
औषधि खाएपछि उनलाई दुई दिन जति ठीक भएको थियो । तर वैशाख ३० गते रातिदेखि उनलाई बान्ता भएपछि जेठ १ गते फेरि सोही क्लिनिकमा जाँदा जण्डिस भएको भन्दै अन्यत्र लैजान रिफर गरेका थिए । सोही दिन स्थानीय व्यवसायी भोजराज भट्टराईले मोटरसाइकलमा राखेर उनलाई अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कस्थित छायाँ पोलिक्लिनिकमा पु¥याएका थिए । त्यहाँका डाक्टरले जाँच गरेपछि विरामीलाई मणिग्रामको क्रिमसन अस्पताल लैजान रिफर गरेका थिए ।
बुटवलबाट सन्धिखर्क गएको एम्बुलेन्समा राखेर उनलाई जेठ १ गते नै क्रिमसन अस्पताल ल्याई आइसीयूमा राखेर उपचार थालियो । सन्धिखर्कबाट मणिग्रामसम्म एम्बुलेन्समा उनीसँगै उनका साला सहित दुईजना र चालक मात्रै आएका थिए ।
क्रिमसनमा ल्याएर इमर्जेन्सीमा भर्ना गरी जाँच गर्दा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि जेठ २ गते नै उनको स्वाब निकालेर परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । दुई दिनसम्म आईसीयूमा राख्दा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि भेन्टिलेटरमा सारिएको विरामीका साला विष्णुबहादुर वलीले बताए । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनमा एक्युट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम, निमोनिया र मुटुको समस्या देखिएको क्रिमसन अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
लकडाउनका कारण विद्यालय पनि बन्द भएकाले गाउँमै बसिरहेका उनमा कसरी कोरोना संक्रमण भयो भनेर गाउाँसी अचम्ममा परेका छन् । ‘आफ्नो टोलबाट बाहिर कतै जानुभएको थिएन, भारततिरबाट आएकासँग पनि भेटघाट–सम्पर्क भएको थाहा छैन,’ मृतकका भाइले भने, ‘दाइलाई कोरोना देखियोभन्दा अचम्म लागेको छ ।’
Prevकाठमाण्डौका सवारी चालकलाइ को*रोना संक्रमण, मध्यराति १ बजे अस्पताल लगियो !
Nextनेपालको पक्षमा बोलेको भन्दै मनिषा कोइरालामाथि खनिए भारतीय मिडिया
दुखद खबर्: १३ वर्षे बालिकालाई ३ युवकले घर लगेर यस्तो सम्म गरे पछि बो ल्न नसक्ने भईन् (हेर्नुहोस भिडियो)